SIDA LOO KORI KARO SHEYGA WADDANKA: SHARAXAADDA IYO ASTAAMAHA YAANYADA BISLAADAY EE HORE - NOOCYO YAANYO
Tamaandho - Had iyo jeer waa xal wanaagsan oo loogu talogalay inuu bannaanka u. Waa mid aad u fudud in ay ku koraan goobahaaga, waxaana jira faa'iidooyin badan oo iyaga ka mid ah. Marka laga soo tago qiimaha nafaqada, yaanyada ayaa hodan ku ah fiitamiinada iyo nafaqooyinka, waxayna ku qurxin karaan wixii saxa ah. Si ay u helaan in ay ku raaxaystaan ​​khudraddan cajiib ah, kuwa jilicsan ayaa goynaya noocyo badan oo hore, oo iyaga ka mid ah Tamaandho Noocyo Shidaal, kuwaas oo sii kordhaya ee beerta. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan darajada yaanyo ah ee Adeegga, oo ku saabsan sida loo kori karo yaanyadaas si madaxbanaan, maqaalkan ayaa sheegi doona.
Yaan Maskaxda: Qeexid
Kala duwan yaanyo ah - yaanyada hore u bislaaday, taas oo xitaa beeralay aan caqli-gal ahayn oo la qabsan karo korriin, sababtoo ah khudradan ayaa ugu horreyn lagu kala soocaa iyadoo aan la qabin xaalad sii kordheysa iyo daryeel. Tamaandhada Adeegga ayaa leh dabeecad soo jiidasho leh oo loogu talogalay inuu bannaanka u yahay: warshad noocyo kala duwan ah waa baadiyaha caadiga ah oo leh height illaa 45 illaa 55 cm.
Ma taqaanaa? Tomatoes Shuttle - kala duwanaansho goynta leh koritaanka xadidan.
Miraha waa casaan iyo fareeshka, oval-qaabeeya, oo leh weel caag ah. Maqaarka midhaha midabkiisu waa mid madow, oo casaan iyo mid aad u cufan. Celcelis ahaan, culeyska miro wuxuu gaaraa 45 illaa 60 g. Isku-duwanaanta yaanyada Adeega wuxuu si fiican u dhalayaa: laga bilaabo 5 illaa 8 kg oo miro ah ayaa laga soo ururin karaa hal mitir oo laba jibbaaran oo dhul ah. Buundooyinka horay u kala soocaan 80-120 maalmood ka dib soo bixitaanka caleemaha.
Toobo sii kordhaya Shidaal: xaalado beerto
Tamaandhada Adeega uma baahna daryeel gaar ah, laakiin waxaa fiican in la abuuro shuruudo u gaar ah geedka, iyo ugu horreyntii waxay ku saabsan tahay meesha la beerto.
Xagee loo geynayaa sheyga
Inta badan, tamaandhada ee kala duwan ee adeegga waxaa la koray geedo, laakiin gobollada qaar ka mid ah dhirta waxaa lagu beeray karaa si toos ah on sariirta beerta. Labada xaaladoodba, meesha beerashada waa in si wanaagsan loo iftiimaa oo leh hawo wanaagsan, laakiin waxaa fiican in la dhigo weelasha geedo ama duurka dhul furan oo ka fog qoraalada. Kuwa ugu muhiimsan ee yaanyada ee yaanyada ah waxay noqon doontaa zucchini, qajaarka, karootada, kaabajka, dill ama dhir.
Waa muhiim! Waxaa fiican inaadan beeran adeegga ku xiga ee ukunta, baradhada iyo basbaaska.
Waa maxay nooca shidaalku u baahan yahay adeegga koritaanka guulaystay?
Haddii aad horey u go'aansatay in aad soo iibsato yaanyo kala duwan, ka dibna waxaa wanaagsan in la doorto substrate leh halabuurka wanaagsan ee beerashada. Xayawaan aad u nafaqo leh oo dabacsan oo dabacsan ayaa ugu wanaagsan tan, si loogu sahlo helitaanka biyaha iyo ogsijiinka xididada; pH ee ciidda waa 5.5-6.0. Waxa ugu wanaagsan in la isku daro 2 qaybood oo khudradda ah iyo 1 qayb oo ka mid ah chernozem, waxaad sidoo kale ku dari kartaa 1 qayb oo ciid ah iyo qaar ka mid ah hadhuudhka ah ee carrada.
Qaadista Shirkadda geedo
Tamaandhada Guud waxaa badanaa lagu koray iyadoo loo marayo geedo.
Yaanyo Tijaabinta: waqtiga, diyaarinta abuurka, xulashada kartida beeritaanka
Ka hor inta aadan beerin shinni yaanyo ah Adeegga, waa lagama maarmaan in la fuliyo shaqo diyaar ah. Abuurku uma baahna diyaarin gaar ah: waxay ku filan yihiin in lagu nadiifiyo xal biya ah iyo hydrogen peroxide ee saamiga 3 ml of peroxide halkii 100 ml oo biyo ah. Isku dar ah waa in la kululeeyo 40 darajo oo miraha ka dhig 10 daqiiqo. Si aad u biqiso abuurka, waxaad isticmaali kartaa maro: waxaad u baahan tahay inaad qoydo oo aad miraha ku riddo si aysan u taaban midba midka kale. Seeds, ku duudduubtay maro, waa in lagu dhejiyaa weel caag ah oo lagu daboolo filim.
Ma taqaanaa? Daboolida filimka oo dhan oo aan macquul ahayn, waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo dalool yar oo adigoo isticmaalaya hawada.
Filimku waa in si buuxda loo soocaa dhowr jeer maalintii maalinta hawada laga saarayo. Seeds Gormin si dhakhso ah iyo dhowr maalmood waxay diyaar u yihiin beero. Awoodda beeridda waxaa loo dooran karaa inaad jeceshahay, ujeedadaas, ku haboon iyo peat, iyo waraaqaha, koobabka caagagga ah ama duubis. Xitaa haddii weelku cusub yahay, waa in la nadiifiyaa: qoyso xalka adag ee kiniinka potassium muddo nus saac ah. Waxaa fiican inaad ku beeri geedo dhammaadka February, ka dibna horey u dhammaadkii May - bilawga Juun waxaad awoodi doontaa inaad ka farxiso qoyska reer yaanyada guriga.
Nidaamka degitaanka waa mid sahlan: haddii aad ku beeri kareeraha geed kasta oo ku jira weel gaar ah, ka dibna hal weel oo aad u baahan tahay inaad abuurto 2-3 abuurka si qoto dheer ah 0.5-1 cm, iyo haddii ay tahay wadarta guud ee ballaaran, markaa waxaad u baahan tahay inaad abuurto abuurka ah ee ciidda qoyan ee diyaarsan, jeexjeexyada , 1-2 cm qoto dheer fogaan ah 5-7 cm. Seed waxay u baahan tahay in la qoto dheer 1-1,5 cm
Sida loo daryeelo geedo Shidaalka
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in ay si joogto ah u hawo geedo iyo qoyan ciidda calaamada ugu horeysa ee qalajinta ee substrate ah. Ku sii fiicnaanta qoriga buufinta. Ka kooban sanduuqyo leh geedo u baahan tahay heerkul ah 22-24 ° C. Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha ugu horeysay u muuqdaan, waxaad u baahan tahay inaad weelka ku wareejiso geedo si meel qabow iyo ka saar filimka. Toddobaadka dhexdiisa, heerkulku waa inuu ahaado 16ºC inta lagu jiro maalinta iyo 13 ° C habeenkii. Toddoba maalmood ka dib, heerkulku wuxuu mar kale kor u kacay illaa 19 ° C. Waraabinta waa inay ahaato mid dhexdhexaad ah ama biyo roob leh heerkul ah ilaa 19 ° C.
Waa muhiim! Sida ugu dhakhsaha badan caleen cotyledon gaarto 0.5 cm oo dherer ah, dhirta waa la daadin karaa.
Khubarada ayaa kugula talin doona caymiska dheeraadka ah ee geedo, taas awgeed waxaad isticmaali kartaa nalalka dhaadheer. Bacriminta waa in la fuliyaa iyadoo ku xiran xaaladda gobolka, waxaad bacrimin kartaa geedo "Nitrofoskoy" ama "Crystal". Marka ugu horaysa, dhirta waxaa la quudin doonaa 10-12 maalmood kaddib marka la qaado.
Ka hor inta aan lagu beeri geedo dhul furan, waa in la adkeeyaa: marka heerkulku gaadho 8-10 ° C, u qaado balakoonka ama bareeriga saacad iyo badh. Si loo dhigo yaanyada meel joogto ah u Adeega, marka heerkulka ciidda gaaro 12 ° C. Ka hor inta beerto tamaandhada, waxaa lagama maarmaan ah in ciidda si buuxda oo fara badan loogu waraabiyo si ay dhulka "u wada dhuubaan" hareeraha xididada oo aan dib udhicin.
Qoto dheer ee beerto waa in ay la siman tahay dhererka taangiga kaas oo geedo la koray. Waxaa fiican inaad ku beeri geedo galabtii, cimilada daruurta. Wixii Shuttleman ah, masaafada u dhaxaysa safafku waa inay ahaataa ugu yaraan 30-35 cm. Markaad duurka ku beertay waxaad u baahan tahay inaad wado qashin, kaas oo aad mar dambe xireyso yaanyada.
Koraaya Tamaandheys ah: sida loo daryeelo warshad
Tamaandhada Adeegga uma baahna dadaal badan oo sii kordhaya. Waa ku filan waqti ka waqti si biyo ah iyo quudiyo dhirta, iyo sidoo kale ma iloobin ku saabsan jaridda dhirta iyo imtixaanka si loo ogaado jiritaanka cudurada iyo cayayaanka.
Tamaandho - Waa dalagga khudradda leh ee u adkaysta abaarta, laakiin dhalidda yaanyada, marka la raaco xeerarka waraabka, waxay si weyn u kordhinayaan. Waxaa si gaar ah muhiim ah in la ilaaliyo tallaabooyinka waraabinta isla markiiba ka dib markaad gashato dhul furan. Si ka badan si taxadar leh waxaad u waraabisaa dhirta, si dhakhso ah waxay qaadan doontaa xididka. Sidoo kale, dareenka gaarka ah ee waraabinta yaanyada waa in la bixiyaa inta lagu jiro abuuritaanka ugxan-yar ee midhaha, haddii kale ubaxyada iyo ugxan-yari ayaa dhacaya.
Inta lagu jiro Bisaylkiisa, waxaa muhiim ah in aadan yaanyada badan oo socodka, sababtoo ah qoyaan xad dhaafka ah waxay keeni doontaa qadarka qalalan ee tamaandhada inay hoos u dhaco, oo waxay jajabin doonaan ama kallifay. Qoto dheer ee ciidda qoyaanka sidoo kale waxay ku xiran tahay muddada koritaanka, tusaale ahaan, inta lagu guda jiro xilliga geedo beerto si ay u sameeyaan ugxan-sidaha, waraabinta waa in la sameeyaa si la mid ah in ciidda loo qaxay si qoto dheer ah 20-25 cm, laakiin inta lagu jiro Bisaylkiisa miro - 25-30 cm . Waraabinta yaanyada waxay ubaahan tahay 7-10 maalmood oo kasta inta ay ka tahay heerka 30 litir oo biyo ah halkii mitir labajibbaaran.
Si kor loogu qaado dhalidda ee yaanyada, iyo sidoo kale si loo xoojiyo dhirta, yaanyada u baahan tahay in la quudiyo. Quudinta koowaad waxaa la sameeyaa 12 maalmood ka dib markii laga beerto geedo. Markaas waxaad u baahan tahay inaad quudiso dhirta 7-10 maalmood oo kasta, iyadoo la isticmaalayo macdanta iyo macdanta organic. Wixii hal geedka waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho 0.5-1 litir oo bacrimin ah.
Ma taqaanaa? Si ay midhaha si fiican u bilaabaan inta lagu jiro guntin iyo ubax, waxaad ku buufin kartaa dhirta leh xal of Epin ee saamiga 2 dhibcood halkii 200 ml oo biyo ah.
Sidoo kale, sidii tallaabo ka hortag ah, nafaqada foliar waxaa lagu fulin karaa boric acid, taas oo ka dhigi doonta dhirta inay u adkeyso xaaladaha cimilada xun. Si loogu badalo boric acid biostimulator ku habboon "Ovary".
Inkasta oo xaqiiqda ah in Shirkadda - warshadu waa mid u adkaysata oo u dulqaadan karta xitaa xaaladaha cimilada ugu xun, waqti ka waqti iyo noocyada kala duwan ayaa waxyeelleyn kara cudurada iyo cayayaanka. Ka mid ah cudurrada ugu caansan ee yaanyada, bannaanka u badan tahay in ay la kulmaan xitaa, kaas oo saameeya geedka oo dhan iyo la socda muuqaalka kore ee brown on jir, caleemaha iyo midhaha laftiisa. Cudur kale oo khatar ah waa cudurka anthracnose, cawaaqibta taas oo ah dhibco madow oo dhan geedka, laakiin badanaa badanaaba miraha aan dhicin. Cudurada ugu caansan ee ku dhowaad dhammaan khudaarta cagaaran iyo khudradda miro-dhalatada ah waa xayr, oo u muuqda mid dhibco cad cagaarka. Waa lagama maarmaan in dhirta laga ilaaliyo cudurrada iyadoo la adeegsanayo fungicides, iyo sidoo kale si joogto ah cawska, sababtoo ah inta badan cudurrada ku nool caleemo dhintay iyo haramaha.
Sida cayayaanka, inta badan tamaandhada of the Service waxaa la weeraray by xayawaanka, aphid a-qaraha-kordhaya, nematodes gall, caarada caarada, iyo sidoo kale midabka Colorado baradho caadi ah. Waa lagama-maarmaan in loola dagaallamo cayayaanka by macdanta cayayaanka, iyo sidoo kale waxaa suurtagal ah in lagu fuliyo buufin leh xal saabuun.
Goynta yaanyada waxay noqon kartaa 3-3.5 bilood ka dib markaad transplanting dhulka ku furto.
Waa muhiim! Toobashada yaanyada ee noocyada kala duwan waxay noqon kartaa waqti dheer, oo ku dhowaad xilli oo dhan.
Waxaad xitaa soo ururin kartaa yaanyada oo aan qaangaadhin, ku rid meel qorrax leh iyo, soo jeestaan, u dospet. Waa muhiim in tamaandhadu aysan kicin, oo haddii ay hore u dhacday, miraha ay lumiyeen midabtakoor, waa in si deg deg ah loo shaqeeyaa ama la baabi'iyaa. Xaaladda ugu fiican ee goosashada weli waa mid miro adag, ka dibna miraha ayaa sii dheereyn doona.
Yaan Duubista: Kacaawinta iyo qasaarooyinka kala duwan
Tamaandho noocyo kala duwan - Fursad wanaagsan oo loogu talagalay kuwa ku dhowaad isku midka ah barafka barafku wuxuu jecel yahay khudaarta cusub ee beerta. Dabcan, bislaanshaha hore ee yaanyada kuwaasi waa qeexitaan dheeraad ah ee noocyada this. Faa'iidada kale ee muhiimka ah ee adeegga ayaa ah in mirahaas la hayn karo waqti dheer, iyo sidoo kale sababtoo ah cabbirkooda yaryar ee si fudud ayaa loo ilaalin karaa xataa xitaa weel yar. Faa'iidooyinka Shidaalka waxaa ka mid ah xaqiiqda ah in tayada sii kordhaysa ee noocyada kala duwan ay tahay mid sahlan, mana u baahna xaalado gaar ah oo wanaagsan.
Sida ay sheegeen bannaanka u ah, Shirkadu waxay leedahay labo kaliya minuses: mana aha mid tayo badan oo dhadhan leh. Sida aad u arki karto, sii kordhaya Yaanyo kala duwan oo yaryar waa nidaam fudud, oo haddii aad isku daydo in yar oo ka badan ayaa loo baahan yahay, ka dibna dhirta ayaa ku farxi doona dalag fiican.